नगरपालिकाका प्रमुख नै फोन गर्न दैनिक एक घण्टा हिँडेर अग्लो डाँडामा जानुपर्ने
जाजरकोट, १८ मंसिर । छेडागाड नगरपालिकाका प्रमुख लालबहादुर महतरा हरेक दिन फोन सम्पर्कका लागि कार्यालय मनघाटबाट माथि डाँडामा जान्छन् ।
कार्यालय समयमा उनीमात्र होइन अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई यसरी जङ्गलको डाँडामा गएर फोन गर्नु दैनिकी बनेको छ । एक घण्टा हिँडेर फोन गर्नु उनीहरुको रहर नभई बाध्यता हो ।
कार्यालयमा टेलिफोन नलाग्ने भएकाले फोन सम्पर्कका लागि अग्लो डाँडामा जानुपर्ने नगरप्रमुख महतारा बताउँछन् । बजारमा टेलिफोनले काम गर्दैन डाँडामा पुगेपछि नेटवर्क आउछ अनि फोन सम्पर्कमा आवश्यक कुरा गरेर कार्यालयमा फर्कनु पर्छ उनी भन्छन् ।
कार्यालयमा नेटवर्क नलाग्ने समस्याले नगरको कामकाज पनि प्रभावित भएको छ । कार्यालयमा बस्दा सबैसँग सम्पर्क गर्न नसकिने भएकाले समय मिलाएर डाँडोमा पुगेर फोनबाट हुने काम फत्ते गर्नुपर्ने नगरप्रमुख महतारा भन्छन् । टेलिफोन सेवा विस्तारका लागि सम्बन्धित निकायमा बारम्बार परिपत्र र ताकेता गर्दा पनि काम नभएको उनको गुनासो छ ।
नेपाल टेलिकमले जाजरकोटको सबै ठाउँमा टेलिफोन सेवा पुगेको जिकिर गरे पनि पश्चिमी क्षेत्रको अधिकांश ठाउँका बासिन्दा सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित छन् । गाउँमा टेलिफोन सुविधा नहुँदा स्थानीयवासीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । सञ्चार सुविधाको अभावमा बिरामीको उपचार, आपत्कालीन उद्धार देश विदेशमा रहेका आफन्तसँगको सम्पर्क कठिन भएको शिवालय–१ मोर्क बजारका पूर्णबहादुर महतरा उल्लेख गर्छन् । अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा पनि जनता सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित हुनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ ।
जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रको शिवालय गाउँपालिकाको मोर्क र बालुवाबजार, छेडागाड नगरपालिको खारा, मनाघाट र थलबजार र कुशेगाउँपालिकाको बाटुले बजारलगायत स्थानमा पनि सञ्चार सुविधा छैन । ती ठाउँका बासिन्दालाई एक कल फोनका लागि नगर प्रमुख जस्तै अग्ला डाँडा र जङ्गलका रुखमा चढ्नु पर्ने बाध्यता छ । छिटो छरितो सम्पर्क र सारोगारोमा कामका लागि फोन सम्पर्क नहुँदा हैरानी बेहोर्नुपरेको छेडागाड नगरपालिका–१ का राम शाही बताउँछन् ।
पश्चिमी क्षेत्रका मुख्य बजारका टेलिफोन सुविधा नहुँदा ती ठाउँको व्यापारीका कारोवारसमेत प्रभावित भएको छ । टेलिफोन सेवा विस्तारका लागि वर्षौंदेखि माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । चुनावमा मत माग्न आउने नेतादेखि जितेका जनप्रतिनिधिसँग समस्या राखे पनि समाधान नभएको मनाघाटका प्रेमबहादुर केसी उल्लेख गर्छन् । सम्बन्धित ठाउँमा तत्काल खबर आदानप्रदान गर्न नसक्दा समस्या हुँदै आएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । रासस
भूकम्प नै ल्याईदिने हाइड्रोजन बमबारे जान्नै पर्ने ५ कुरा, यसकारण तर्सिँदैछन् पश्चिमा !
सावधान ! मोबाइलले बढाउँछ उच्च रक्तचाप
बहुप्रतिक्षित बेगुला एक्सएल पूर्ण सञ्चालनमा आयो
७ शर्टकट जसबाट मिल्छ युट्यूबमा भिडियो हेर्दा डब्बल मज्जा !
मोबाइल बैंकिङ गर्नुहुन्छ ? यी कुरा ध्यान दिनुहोस्
विन्डोज ७ मा आजदेखि सेक्युरिटी अपडेट नहुने, इमेल र बैंकिङमा जोखिम बढ्यो
स्मार्टफोनमा भाइरस संक्रमण कसरी रोक्ने ?
कम्प्युटरका महत्वपूर्ण ‘सर्टकट की’हरु, जसले तपाईंलाई बनाउँछ फास्ट र स्मार्ट
कोकाकोलादेखि भियाग्रासम्म यी आठ वस्तु भूलवश बनेका थिए, पछि संसार जिते
मोबाइल रिसेट गर्दा पनि सधैँका लागि डिलिट हुन्न फाइल, अपनाउनुस् यस्तो ट्रिक
सूर्यमुखी किन फर्किन्छ सूर्यतिर ? वैज्ञानिकले पत्ता लगाए यस्तो रहस्य
मुगु जिल्ला चारदिनदेखि सञ्चारविहीन, नेपाल टेलिकमका सबै सञ्जालले काम गर्न छाडे
काम नलाग्ने भनेर फ्याँकिने खाली बोत्तलबाट यसरी पंखा बनाउनुहोस्
तपाईंलाई थाहा छ ल्यापटपको चार्जर वा अन्य चार्जिङ केवलमा हुने यो डल्लोको काम ?
क्याल्कुलेटरमा रहेका उस्तै दुई बटन C र CE मा के अन्तर छ ? जानिराख्नुस्